2 Realtek AC'97 Drivers A4.06
Realtek AC 97 sound driver. Download
3 Netman 6.41
Netman - PC Remote Access & Control Software Download
4 Skype 5.5.0.113
5 Google Chrome 14.0.835.15
6 KaKa Folder Protector 5.56
7 Counter-Strike 1.6
Counter-Strike isaMOD for Half-Life. Download
8 NET Framework 2.0 Final
The programming model of the .NET Download
9 Download Accelerator Plus 9.7.0.4
DAP - Fastest download speeds
10 Realtek High Definition Audio Driver for Vista/Win7 32/64 bits R2.63
High definition audio driver from Realtek. Download
11 SoftPerfect Network Scanner 5.2.1
12 PlayStation Portable (PSP) Firmware 6.39
PlayStation Portable System Software Updater. Download
13 Quick Heal AntiVirus Pro 2011 12.00
14 GTA San Andreas Display Pictures 1.0
Grand Theft Auto graphics for MSN Messenger! Download
15 Avira AntiVir Personal - Free Antivirus 10.0.0.652
16 Adobe Flash Player (IE & AOL) 9.0.28.0 Final
17 3GP Player 2011 1.2
18 Mozilla Firefox 5.0
19 Bluetooth File Transfer FULL 1.70
20 Google Talk 1.0.0.105
Google chat messenger with voice.
Subscribe Emails 2.598
License: Freeware, Size: 0.60 MB
Download (936) Evidence Exterminator 2.75
License: Shareware, Size: 0.91 MB
License: Shareware, Size: 0.88 MB
Download (2615) PC Security Tweaker 9.64
License: Shareware, Size: 1.88 MB
Download (2410) Internet Trace Destroyer 9.64
Download (9648) Encrypt My Information 9.64
Local SMTP Server Pro 5.23
License: Shareware, Size: 16.77 MB
Download (2217) Fx MPEG Suite 9.7.0
License: Demo, Size: 6.72 MB
License: Shareware, Size: 3.02 MB
Download (208) Actual Transparent Window 6.6
License: Shareware, Size: 4.10 MB
License: Shareware, Size: 4.25 MB
Download (1228) Winged Warrior 2.41.00
License: Shareware, Size: 0.52 MB
A1 Keyword Research 3.2.8
License: Shareware, Size: 4.14 MB
Download (257) A1 Website Download 3.2.8
License: Shareware, Size: 3.63 MB
Power Video Cutter 5.3.10
License: Shareware, Size: 22.76 MB
Download (13096) Power Audio Video DVD Converter 3.3.11
License: Shareware, Size: 18.06 MB
All Video to Audio Converter 4.3.10
License: Shareware, Size: 15.43 MB
Download (1121) Power MP4 iPod PSP 3GP AVI MPG WMV Video Converter 9.3.10
License: Shareware, Size: 18.35 MB
Power RM AVI MPG VCD WMV Converter 6.3.10
License: Shareware, Size: 16.93 MB
Download (2583) Easy DVD Converter 3.0.29
License: Shareware, Size: 9.78 MB
ALO AVI MPEG WMV 3GP MP4 iPod PSP Converter 7.1.49
License: Shareware, Size: 18.30 MB
Download (3395) Free CD to WAV MP3 WMA AMR AC3 AAC Ripper 3.6.72
License: Freeware, Size: 3.54 MB
AML Power Video Converter 5.9.281
License: Shareware, Size: 20.51 MB
Download (2432) Power AMR MP3 WAV WMA M4A AC3 Audio Converter 4.1.94
License: Shareware, Size: 3.79 MB
Easy Audio Recorder 3.2.217
License: Shareware, Size: 2.65 MB
Download (2666) ALO Video to Audio Converter 2.3.200
License: Shareware, Size: 15.34 MB
ALO Audio CD Ripper 3.0.252
License: Shareware, Size: 3.95 MB
Download (2545) Any Video/Audio Converter 6.1.49
License: Shareware, Size: 18.37 MB
ALO Video Converter 7.1.49
Download (9858) ALO Power Audio Converter 5.0.146
ALO Audio Editor 3.3.108
License: Shareware, Size: 4.71 MB
Download (3074) ALO CD & DVD BURNER 4.6.82
License: Shareware, Size: 3.98 MB
RM Audio Converter Joiner 1.0.313
License: Shareware, Size: 6.54 MB
Download (1036) AML Fast Audio Converter 1.1.338
License: Shareware, Size: 1.66 MB
Fast RM to MP3 Converter 4.2.100
License: Shareware, Size: 6.53 MB
Download (5369) ALO RM to MP3 Converter 7.0.146
Convert RM, RA, RAM, RMVB, RMJ, WAV, MP3, WMA
License: Shareware, Size: 6.75 MB
License: Shareware, Size: 12.30 MB
Download (1495) ALO Audio Center 3.0.295
License: Shareware, Size: 19.88 MB
12 Aug 2011 Ad-Aware Internet Security Pro 9.0.5
Anti-Spyware and Anti-Virus in One.
11 Aug 2011 Kiran's Typing Tutor 1.0
11 Aug 2011 Spiffy 0.5.9
An intuitive Gmail alert.
11 Aug 2011 Auslogics Disk Defrag 3.2.1
5 Aug 2011 RealPlayer SP 1.1.4
5 Aug 2011 Rainlendar Lite 2.8.1 Build 103
5 Aug 2011 QuickTime 7.7.1680.34
A cutting-edge digital media software.
5 Aug 2011 Norton Ghost 15.0
5 Aug 2011 MPlayer 2011-05-25 Build 90
A full-featured movie player.
5 Aug 2011 Mailplane 2.4 Build 1610
Free customizable photo albums for any site. 21189
All menus,pages,links,buttons are XML driven 270
Full customizable dynamic horizontal menu wit 61
Quickly create custom web albums 304
Web albums with justafew mouse clicks. 173
Organize, enhance, and share digital photos! 365
Organize, enhance, and share digital photos! 172
Catalog images in this database. 675
Full Service Web site Hosting and Site Design 145
ko's favorite links:
Jul6- 126. pdf ဖိုင်တွေပြောင်းတဲ့ ဆောဝဲလ်......
Jul4- 125. Memory Strick ထဲကဟာတွေကို ဖွတ်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်....
Jul3- 124. Malware sweeper ဒေါင်းလို့ မရဘူးဆိုလို့...
May 17 - 123. malware တွေကို သတ်တဲ့ Software...
Apr3- 122. USB drives တွေအတွက် Password ပေးတဲ့ software..
Mar 23 - 121. Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software....(၂)
Mar 22 - 120. Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software....(၁)
Mar 22 - 119. Active SMART Software လိုချင်ရင်..
Mar 21 - 118. ISA server ကို မြန်မာလို လေ့လာဖို့...(၂)
Mar 11 - 117. ISA Server .ကိုမြန်မာလို လေ့လာဖို့.....(၁)
Mar 10 - 116. နံပါတ် 106 မှ နံပါတ် 115 အထိ Software တွေကို အသုံးပြုနည်း...
Mar 10 - 115. Operation System ကိုစစ်ပေးတဲ့ Software...
Mar 10 - 114. Sound Card ကိုစစ်ပေးတဲ့ Software...
Mar 10 - 113. Modem ကောင်း ၊ မကောင်းစစ်ပေးတဲ့ Software...
Mar 10 - 112. Monitor မှ CRT & LCD မျက်နှာပြင် ပုံရိပ်တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software..
Mar 10 - 111. UPS & laptop computer battery တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software...
Mar 10 - 110. Wireless WiFi လုပ်ပေးတဲ့ Software...
Mar 10 - 109. Program တွေကို Test Plan လုပ်ပြီးစစ်ပေးတဲ့ Software....
Mar 10 - 108. PC ကို BurnIn စစ်တဲ့ Software...
Mar 10 - 107. Performance ကိုစစ်တဲ့ Software....
Mar 10 - 106. Keyboard ကိုစစ်တဲ့ Software...
Mar9- 105. File အားလုံးကို ကြည့်လို့ရတဲ့ Software...
Mar9- 104. Adware ကိုရှင်းပေးတဲ့ Software...
Mar9- 103. ပုံတွေကို တပြိုင်နက်ကြည့်တဲ့ Software.....
Mar9- 102. Icon လုပ်တဲ့ Software...
Mar9- 101. Program တွေ PC ထဲမှာ နေရာယူတာကို ကြည့်တဲ့ Software...
Mar9- 100. Mac မှ Window သို့ ဖိုင်ပြောင်းပေးတဲ့ Software....
Mar9- 99. ပုံတွေအများကြီးကို တစ်ခါတည်း နာမည်ပြောင်းတဲ့ Software...
Mar9- 98. MTV MUSIC တွေလိုချင်ရင်...
Mar9- 97. English - Myanmar ဖောင့်များ.....
Mar9- 96. English - Myanmar အဘိဓာန်စာအုပ်....
Mar9- 95. Myanmar-English-Myanmar Online အဘိဓာန်...(၂)
Mar9- 94. English - Myanmar - English Online အဘိဓာန်...(၁)
Mar9- 93. English - Myanmar အဘိဓာန် Software...(ဖုန်း ၊ PC တွေအတွက်ပါ ရတယ်..ဟဲဟဲ ပိုက်ဆံတော့ ဆောင်ထားပေါ့..)
Mar9- 92. Windows Product Key ကိုရှာတဲ့ Software...
Mar9- 91. ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ ဖိုင် ကိုရှာတဲ့ Software...
Mar9- 90. CD/DVD ကောင်းမကောင်း စမ်းတဲ့ Software....
Mar9- 89. ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပြောင်းပေးတဲ့ Software...(၂)
Mar9- 88. ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပေးတဲ့ Software...(၁)
Mar9- 87. Partition ချတဲ့ Software....(၃)...(ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံး Software..ပေါ့.)
Mar9- 86. Partition ချတဲ့ Software....(၂)
Mar9- 85. Partition ချတဲ့ Software...(၁)
Mar9- 84. PC ထဲက အမှားတွေကို ပြတဲ့ Software ...
Mar9- 83. Password တွေကို ရှာပေးတဲ့ Software...(မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ မသုံးစေချင်ဘူးဗျာ..)
Mar9- 82. ကာရာအိုကေ ဆိုလို့ရတဲ့ Software...
Mar9- 81. Internet သုံးထားတဲ့အတွက် မလိုတဲ့ ဖိုင်တွေကိုဖျက်တဲ့ Software...(တကယ်လိုအပ်တယ်ဗျာ..)
Mar9- 80. ပုံတွေကို Album အလိုက်ပို့လို့ရတဲ့ Software...
Mar9- 79. Memory Card ထဲမှ ပုံတွေ ၊ ဗီဒီယိုတွေ ၊ သီချင်းတွေ မှားဖျက်မိရင် ပြန်ယူပေးတဲ့ Software..
Mar9- 78. Trojan (ထရိုဂျန်) ကိုရှင်းတဲ့ Software...
Mar 8 - 77. DVD ကူးတဲ့ Software တွေ..
Mar 8 - 76. Video ဖိုင်တွေဖွင့်တဲ့ Software...
Mar 8 - 75. WAV မှ MP3 ပြောင်းပေးတဲ့ Software..
Mar 8 - 74. Powerpoint ကနေ DVD ကိုပြောင်းပေးတဲ့ Software...
Mar 8 - 73. MP4 လုပ်တဲ့ Software တွေ...(အများကြီးပဲဗျို့...)
Mar 8 - 72. DVD ဖြတ်တဲ့ Software...
Mar 8 - 71. ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမှ မှားဖျက်မိသော ပုံများကို ပြန်ရှာပေးသော Software..(၂)
Mar 8 - 70. ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမှ မှားဖျက်မိသော ပုံများကို ပြန်ရှာပေးသော Software..(၁)
Mar 8 - 69. DVD ထဲက သီချင်းတွေ ဖြတ်တဲ့ တောက်တဲ့ Software..(၂)
Mar 8 - 68. DVD ထဲက သီချင်းတွေကို ဖြတ်တဲ့တောက်တဲ့ Software..
Mar 8 - 67. Download Management လုပ်တဲ့ Software..
Mar 8 - 66. Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software ....(၂)
Mar 8 - 65. Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software..(၁)
Mar 8 - 64. မြန်မာ့ ပညာရှင်များကို လေ့လာဖို့...
Mar 8 - 63. မြန်မာယူနီကုတ် အကြောင်းလေ့လာဖို့...(ကျွန်တော် တကယ်အားပေးတယ်ဗျာ..)
Mar 8 - 62. Webroot Antivirus & Spyware Software ယူဖို့နေရာ..
Mar 8 - 61. Outlook Express ကိုပြင်တဲ့နေရာ...
Mar 8 - 60. AVG Antivirus Download အလကားရတဲ့နေရာ....
Mar 8 - 59. Google reader တဲ့ဟေ့...
Feb 28 - 58. မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်...
Feb 28 - 57. Adobe ရဲ့ Photoshop နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tool တွေလေ့လာစရာ နေရာ..
Feb 28 - 56. အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာနဲ့ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ ဆွေးနွေးဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ နေရာ..
Feb 28 - 55. မြန်မာ E-books တွေ....
Feb 28 - 54. စိတ်ဝင်စားစရာ စာလုံးလေးတွေ...
Feb 28 - 53. Software တွေ ကူးမယ်ဆိုရင်...
Feb 28 - 52. ပရိုဂမ်သမားတွေအတွက်....
Feb 28 - 51. ဖုန်းအလကားပြောရဖို့နေရာ......
Feb 28 - 50. E-Books တွေကူးဖိူ့...
Feb 28 - 49. ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ သတင်း....
Feb 28 - 48. ကွန်ပျူတာ အမေးအဖြေများလေ့လာရန်....
Feb 28 - 47. ပုံလှလှလေးတွေ လိုချင်ရင်...(ကျွန်တော်လဲ ဒီက ခိုးတာဗျို့..)
Feb 28 - 46. ကွန်ပျူတာ အကြောင်း ဘာထူးလဲ..(PC World)..
Feb 28 - 45. Java အကြောင်းသိလိုသမျှ....(မြန်မာက သူငယ်ချင်းတွေကိုတော....sorry..ဖွင့်လို့ရချင်မှ ရမှာ မို့ပါ..)
Feb 28 - 44. Gtalk အကြောင်းစုံစုံ သိချင်ရင်...
Feb 25 - 43. Window ကို မပါစေပဲ Hard Disk ကိုဖျက်တဲ့ software...
Feb 25 - 42. Hard Disk ကို အနေအထားပြတဲ့ software....
Feb 25 - 41. Hard Disk ကို Partition ချတဲ့ software...
Feb 25 - 40. Hard Disk အတွက် Recover လုပ်တဲ့ software....
Feb 25 - 39. Hard Disk ကိုသွေးသစ်လောင်းတဲ့ software..
Feb 25 - 38. Software တွေ အစုံဆုံးနေရာ...(ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်တော့ဆက်ရှာရမှာပေါ့...)
Feb 25 - 37. Gtalk က အသံကို ဖမ်းပေးတဲ့ software......
Feb 24 - 36. Adware နဲ့ Virus ကိုရှင်းတဲ့ software.....
Feb 24 - 35. Windows ကို မထိစေပဲ ဖိုင်တွေကို ဖျက်တဲ့ software........
Feb 24 - 34. Print Screen ဖမ်းတဲ့ Software...
Feb 24 - 33. Memory ကိုစစ်ဖို့ software......
Feb 24 - 32. ကွန်ပျူတာ ဈေးနှုန်းတွက်ချင်ရင်...
Feb 24 - 31. Hardware ကိုစစ်တဲ့ software ....(၃)
Feb 24 - 30. Hardware ကိုစစ်တဲ့ software...(၂)
Feb 24 - 29. Hardware ကိုစစ်တဲ့ software ..(၁)
Feb 24 - 28. Blog တွေရဲ့စာရင်းကို ရှာချင်ရင်....
Feb 24 - 27. ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်...(၃)
Feb 24 - 26. ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်...(၂)
Feb 24 - 25. ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်...(၁)
Feb 24 - 24. ကျော်မယ် ၊ ခွမယ် ဆိုရင်....
Feb 23 - 23. GPass-3.4.4.exe ကိုလိုချင်ရင်...
Feb 23 - 22. GTunnel.exe ကိုလိုချင်ရင်....
Feb 23 - 21. Gtalk မှ နိုင်ငံ လိမ်ပြောသူများကို ဖမ်းဖို့...
Feb 23 - 20. Photoshop ကိုမြန်မာလိုလေ့လာဖို့...
Feb 23 - 19. ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး website..တွေကို ရှာရန်..
Feb 23 - 18. Photoshop လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ..
Feb 23 - 17. မြန်မာ လက်ကွက် လေ့ကျင့်ရန်နေရာ....
Feb 23 - 16. မြန်မာ တခြားဖောင့်မှ ဇော်ဂျီဖောင့် သို့ ပြောင်းချင်ရင်...
Feb 23 - 15. သင်သုံးနေတဲ့ Password လုံခြုံမှု ရှိရဲ့လား..စစ်ချင်ရင်...
Feb 22 - 14. Email တွေကို လုံခြုံအောင် ပို့ကြမယ်..
Feb 22 - 13. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မြင်ဖို့.....
Feb 22 - 12. ကိုယ့်ပုံလေးတွေနဲ့ Logo / Icon လေးတွေလုပ်ချင်ရင်..
Feb 19 - 11. မြန်မာ မိသားစု....
Feb 19 - 10. ကွန်ပြူတာ နဲ့ သတင်း နည်းပညာ..
Feb 19 - 9. နည်းပညာ အတွက် လေ့လာရန်...
Feb 19 - 8. ကော်ဖီချင်ရင်သောက်ဖို့ပါ...
Feb 19 - 7. ကွန်ပြူတာအတွက် နောက်ခံ ကိုယ့်ပုံနဲ့ မြင်ကွင်း...
Feb 19 - 6. ကိုယ်ဘယ်နေ့သေမလဲ သိချင်ကြပါသလား....
Feb 19 - 5. blog နှင့် I T နည်းပညာ
Feb 19 - 4. မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် နှင့် နက္ခတ်
Feb 19 - 3. နိုင်ငံများရဲ့ ကုတ်ကို သိချင်ရင်....
Feb 19 - 2.Special zawgyi download for Blog, (Blog အတွက်အထူး ဇော်ဂျီဖောင့်ပါ..)
Feb 19 - 1.For Download ZawGyi Font kozaw357
ဧရာမြန်မာဖောင့် Unicode 5.2
သက္ကတ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် PDF
ဦးဆန်းလွင် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ခရီးဆောင် အဘိဓာန် PDF (or)Google Doc
Logo နှင့် Icon လေးတွေ
သုံးနေတဲ့ Password လုံခြုံမှု ရှိရဲ့လားစစ်ကြည့်မယ်
Can You Run It - ဂိမ်းသမားများ မိမိကွန်ပျုတာနှင့် ဆော့မည့်ဂိမ်းများ သင့်တော်မတော်
E How (ကိုယ်မလုပ်တတ်တာတွေ မေးကြည့်မယ်)
MP3 ဖိုင်ထဲမှာ ဓာတ်ပုံထည့်သုံးနိုင်တဲ့ MP3tag လေ့လာရန်
TVUPlayer Portable (အခမဲ့ မြန်မာပြည်TV လိုင်း)(or) TVU network(or) စံပီး
WirelessKeyView - ကိုယ့်ရဲ့wireless passowrd မေ့သွားရင်
အင်တာနက်ကြည့်ရန် web browserများ
Tor Download*** အသုံးပြုနည်း( မြန်မာစာတမ်းထိုးကို Play Iconဘေးက နေရာမှာ ပြောင်းကြည့်ပါ။Popup မတက်ပါ။)
CCleaner 3.02.1343 ကွန်ပျုတာကိုရှင်းလင်းပေးမယ့် Software***
LiberKey Ultimate suite (သင့်ပီစီအတွက် လိုအပ်သမျှ free Software များ)*****
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရာမှာ လိုမယ့် Media Codes(အထူးသဖြင့် avi,dixv ရှင်ရှင်ဖိုင်တွေကြည့်ရန်)
. HTML လေ့လာလိုသူများအတွက်
CRACKER နည်းပညာကိုလေ့လာချင်တဲ့သူတွေအတွက် ကိုမျိုးမြင့်ထိုက် ရေးသားထားတဲ့
CRACKER လမ်းညွှန် (မြန်မာလိုစာအုပ်)ပါ။
Labels: CRACKER လမ်းညွှန် (မြန်မာလိုစာအုပ်), download, နည်းပညာစာအုပ်များ
ဝင်းဒိုး7အတွက် Themes နှင့်wallpapers များ
ဝင်းဒိုး7အတွက် Themes
(1)Download Windows7Themes Pack (RTMBuild7600.16385)
(2)Download Windows7Themes Pack (Build 7068)
(3)Download The “Ultimate” Windows7Theme Pack
(4)Download Official Windows7Themes from Microsoft
(5)Download Windows7Themes from ithinkdiff.com
(6)Download Michael Jackson Themes for Windows 7
(7)Download Windows7Box Art Themes
(8)Download Mac OS X Snow Leopard Themes for Windows 7
windows7 အတွက် wallpapers များ လိုချင်ရင် ဒီမှာနှိပ်ပြီး သွားရောက်ရွေးချယ်ပါ။
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး စက်ဆေးတဲံ့ဆော့ဝဲလေးပါ စက်ဆေးတဲ့နေ၇ာမှာ ccleaner ဆိုတဲံဆော့ဝဲထက်အဆပေါင်းများစွာသာပါတယ် ကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် .. Home > Software > PC Tools Registry Mechanic™ 2011 > Download
In the Security Warning dialog box, click "Run" to launch the software. Follow the prompts within the installer to complete the installation of Registry Mechanic.START DOWNLOAD NOW
Popular downloads in Antivirus & Spyware Cleaners
Basic virus protection 290880
Removes even the most stubborn malware 143333
Essential Internet Threat Protection 142350
Antivirus-AntiSpyware-AntiRootkit Protection 138887
Microsoft Windows Defender software. 118511
eScan is an AntiVirus for personal computers 118098
Detects and automatically removes malware. 105522
AVG Anti-Virus Free 10.0 Build 1321a3540
Free antivirus software by AVG 102920
Detect and remove specific viruses 80278
Kaspersky Anti-Virus Update ‎‎‎August 7, 2011
Latest Kaspersky virus definitions. 55925
ဖုန်းတွင်းအသုံးပြု၇န် အသင့်သုံး မြန်မာစာဖောင်.(သို့)မြန်မာsms
မြန်မာစာ ဖုန်းတွင်းသုံး၇န်အတွက်ပါ တ၇ုတ် ဖုန်းများ အိုင်ဖုန်း (i phones) များတွင့်ထည့်သွင်း အသုံးပြု၍ ၇မည်မဟုတ်ပါ ဆိုနီ ဖုန်းများနှင့် နိုကလိယာ ဖုန်းများတွင်ကောင်းကောင်း အသုံးပြု၍၇ပါသည် ဆိုနီ ကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့
မိမိစိတ်တိုင်းကျ အသေးစိပ် ၇ှာဖွေ၍ ဒေါင်းလို လေ့လာလိုလျှင်လိပ်စာ
Messx - MySM Reinvented - Myanmar SMS
မန်မို၇ီ ထဲကိုထည့်ပြီး ဖုန်းထဲမှာ ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်၇ုံပါပဲ ဘာမှ RUN တွေဘာလုပ်နေစ၇ာမလိုပါဘူး ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ဖုန်ထဲမှာပဲ လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့ ဖုန်း ထဲက ဂိမ်းဖွင့်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ အ၇မ်းလွယ်ပါတယ် အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ ဖုန်းဂိမ်းတွေ
ဆိုနီ ဖုန်းအတွက် နောက်ခံအေ၇ာင်များ
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=nav... လင့်တွေကို ကော်ပီ လုပ်ပြီး နောက်စာမျက်နှာ တစ်ခုမှာ ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ
Download ကိုနိုပ်ပြီး ဖုန်းမန်မရီိုကပ်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါပြီး၇င်ဖုန်းထဲပြန်ထည်ြ့ပြီး ဖုန်းဂိမ်း ဖွင့်သလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပေါ့ အဲလောက်တော့လုပ်တတ်မယ်ထင်ပါတယ် အဲဒီမှာ ကိုယ်သိုလှောင်ထားမယ့်နေ၇ာကိုမေးလာပါလိမ့်မယ် games မှာလား app မှာလားဆိုပြီးတော့ပေါ့ ကိုယ့်ထားချင်တဲ့နေ၇ာမှာထားပေးလိုက်ပါ..တစ်ခုတော့၇ှိတယ်နော် ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတဲ့ ဖုန်းတွေထဲမှာ ဆိုနီဖုန်း အစစ် ၇ယ် နိုကလိယာဖုန်းအစစ်၇ယ်ပဲ၇တာနော် ကျန်တဲ့ဖုန်အားလုံးထဲမှာတော့ထည့်ကြည့်တာပဲလက်မခံဘူး ဆိုနီ/နိုကလိယာ နာမည်ခံ တ၇ုတ်ဖုန်းတွေများလာတော့ကိုယ်ဟာကဘာလဲ အစစ်လားအတုလားတော့ကွဲပြားစေချင်ပါတယ် .. နောက်ပြီးဒီဟာက လမ်းကွေ့ မဟုတ်ပါဘူး မြန်မာလိုေ၇းလို့ပို့လို့၇တဲ့ sms ပါ.. ပို့တဲ့ဖုန်းေ၇ာလက်ခံတဲ့ဖုန်းပါ ဒီဆော့ဝဲလေး၇ှိ၇ပါမယ် ဒါမှ မြန်မာလိုပေါ်မှာပါ လက်ခံဖုန်းမှာမြန်မာဖောင့် (ဒီဆော့ဝဲပေါ့ )အဲဒါမ၇ှိ၇င် jri3m5;9e3m790mkl;r အဲလိုမျိုးတွေပဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်
ဖုန်းထဲမှာ အိမ်သာနယ်၇ှင်နေလမ်းမှာကွေ့(အဲ့မှားလို့)international language ၇ှိတယ်ဆိုပေမယ် ကိုယ့်မြန်မာလိုေ၇းတာဖတ်တာလောက်တော့ဘယ်အား၇ပါ့မလဲနော် တစ်ခါတစ်လေတော့လinternational language နဲ့မေ၇းတတ်တာတွေကြုံဖူးတွေ့ဖူးကြမှာပါ...မသုံးချင်တဲ့သူကိုလဲအတင်းမသုံးခိုင်းပါဘူး ကျွန်တော် တီထွင်ထားတာလဲမဟုတ်ပါဘူး သူများတီထွင်ထားပြီးသားကို လုတတ်ကြီးလုပ်ပြီး ပြန်လည် ဝေမျှပေးတာပဲါမယုံ၇င
ထဲကိုဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်က ကော်ပီနေ၇ာမှာလူတတ်ကြီးပါ ...........ကိုယ်ကိုတိုင်တော့ ခိခိ (ဘာမှမသိ)
Mobile Phone နဲ့ မြန်မာဖောင့်
ကျနော်ကတတ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျို့.....ဖုန်းတောင်မရှိဘူးနော်...နိုင်ငံခြားကလူတွေနဲ့ နယ်ကလူတွေ အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ
ခေါင်းစဉ်တစ်ခု စီရဲ့အပေါ်မှာ မူရင်းလင့်တွေ ထည့်ပေးထားပါတယ်
Posted in mobile . Tags: mobile , windowmobile , zawgyi . LeaveaComment »
www.symbian-guru.com/wp-content/uploads/2009/08/how_to_change_choose.jpg" height="240" width="320" />
Posted in mobile . Tags: mobile , nokia , font , zawgyi . LeaveaComment »
Posted in window . Tags: apple , font , zawgyi .2Comments »
Posted in mobile . Tags: blackberry , font , mobile , zawgyi . LeaveaComment »
ဇော်ဂျီ Unicode Font သည် မြန်မာ ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် အသုံးအများဆုံးသော ယူနီကုဒ်တု (pseudounicode) ဖောင့် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ​​ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ဖောင့်သည် Unicode 4.0 (Myanmar1) encoding model ကို အခြေခံထားပါသည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းဆက်လက် ထွက်လာသည့် Unicode 4.1​ (Myanmar2) နှင့် Unicode 5.1 (Myanmar3 ) ကို လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ သုံးစွဲသူ အလိုကျ Alpha ​Info-Tech Co., Ltd. မှ ဆက်တိုက် ပြုပြင်လာခဲ့ပါသည်။ ပါဠိ စာလုံးများ၊ သုံးထပ်ဆင့်များတွင် ပါဝင်ခြင်းမှာ အခြားယူနီကုဒ်ဖောင့် များဖြင့်မတူ တစ်မူထူးခြားချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဇော်ဂျီဖောင့် သမိုင်းမှာ ယခုအထိ ရှင်းလင်းခြင်း မရှိသေးပါ။ ဇော်ဂျီဖောင့် Annotation များတွင် မန္တလေးမှ ကိုဇော်ဝင်းမြတ် ရေးဆွဲသည်ဟု ပါရှိပါသည်။ ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ဖောင့် အလျှင်စလို ဖြန့်ဝေရခြင်းမှာ အခမဲ့ Unicode Font ထုတ်ဝေရန် တာဝန်ရှိသော အများပိုင် Myanmar NLP မှ အချိန်ဆွဲနေခြင်းကို တွန်းအားပေး ရန် အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ။ ညီလင်းဆက် အဆိုအရ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို အမည်မဖော်လိုသော ပညာရှင်ငါးဦးက ၂၀၀၅-ခုနှစ်လောက်တွင် စတင်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။  ။ အချို့ပြောဆိုချက်များအရ ဦးငွေထွန်း၏ project မှ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ပုည(ခေါ်)ဖောင့်တစ်ခု စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ပြီး www.planet.com.mm သို့ ၎င်းအနေဖြင့် တရားဝင် သုံးစွဲခွင့်ပြုခဲ့ရာ Planet Team မှ ယင်းတို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကို ပုညဖောင့်သို့ စတင်ပြောင်းလဲ သုံးစွဲခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဦးသောင်းစုငြိမ်းနှင့် ဦးရဲမြတ်သူတို့ ပါသည်ဟု ယူဆရသော ပညာရှင် ငါးဦးသည် စုစည်းကာ မန္တလေးမြို့အခြေစိုက် Alpha Info-Tech (Mandalay) (ဦးရဲမြတ်သူ၏ ကုမ္ပဏီ) ၏ နည်းပညာထောက်ပံ့မှုဖြင့် မန္တလေးမြို့ အခြေစိုက် ဖောင့်ဒီဇိုင်နာ ဦးဇော်ဝင်းမြတ်ထံ ဖောင့်ဒီဇိုင်းတစ်ခု အပ်ခဲ့ပြီး ဇော်ဂျီမြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်ဟု ခေါ်တွင်စေကာ www.planet.com.mm မှ စတင်၍ တရားဝင် အခမဲ့ ဖြန့်ချိပေးပြီး သုံးစွဲခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် www.alpha.com.mm (Alpha Info-Tech ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်)မှလည်း နည်းပညာ အထောက်အပံ့များ ပြုလုပ်ပြီး ဖောင့်သာမက ဆက်စပ်နည်းစနစ်များပါ ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ www.zawgyi.net အမည်ဖြင့် အဆိုပါ ဇော်ဂျီအဖွဲ့၏ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် လွှင့်တင်ခဲ့ပြီး တရားဝင် နောက်ဆုံးထွက် ဖောင့်များကို version number များ release date များဖြင့် စနစ်တကျ ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ သို့သော် တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အစဉ်အမြဲ ထိန်းသိမ်းရန် အားနည်းခဲ့သည့် အတွက် ဖောင့်အသစ်များကို www.alpha.com.mm ကဲ့သို့သော် အခြားလွယ်ကူသည့် နေရာများမှ ဖြန့်ချိဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်ထိ ဇော်ဂျီဖောင့်သုံးစွဲသူများကြားတွင် တရားဝင်နောက်ဆုံးထွက် ဇော်ဂျီဖောင့်မဟုတ်သည့် version များလည်း များစွာ ပြန့်နှံ့လျက် ရှိသေးကြောင်း တွေ့ရသည်။ Myanmar IT Professional Zawgyi Group discussion များအရ ထိုငါးဦးအဖွဲ့တွင် ဦးသောင်းစုငြိမ်းနှင့် ကိုရဲမြတ်သူ ပါသည်ဟု မှန်းဆနိုင်သည်မှလွဲ၍ အခြားသူများကို မဖော်ထုတ်နိုင်ပေ။
ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ဖောင့်ကို ၂ဝဝ၅-ခုတွင် Zawgyi အဖွဲ့ မှ စတင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။​ ၂ဝဝ၆-ခုတွင် PDF ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း အဆင်ပြေရန် ပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၈-ခုတွင် အသုံးပြုသူများ တောင်းဆို ချက်အရ --္ဘ နောက်တစ်ခုနှင့် bug fix နှစ်ခု ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။
ယနေ့ထိတိုင် ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ဖောင့် ကို ဇော်ဂျီအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ Alpha Info-Tech ၏ အဓိက နည်းပညာပံ့ပိုးမှုများ၊ အခြား third-party developer များ၏ ပံ့ပိုး ဖြည့်စွက်တီထွင်မှုများဖြင့် ဇော်ဂျီသာမက ဆက်စပ်စနစ်များအားလုံးကို တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်လျှက်ရှိပြီး ဖြန့်ချိပါသည်။ ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ဖောင့်သည် အစဉ်အမြဲ အခမဲ့ ဖြန့်ချိမည်ဟု ဆိုပါသည်။  ။ အိုင်တီနယ်ပယ်မှ အမည်မဖေါ်သူ ပညာရှင် ၅ဦးဖြင့် ပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားသော www.zawgyi.net သာလျှင် Official ZawGyi Myanmar Font website ဖြစ်ပါသည် ဟုဆိုပါသည်။  ။
ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ဖောင့်သည် ​ မြန်မာဝတ်ဆိုက်များ သာမက gtalk များတွင်လဲ အသုံးများလျှက်ရှိပါသည် ။ သို့သော် စာစီစာ ရိုက်လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုခြင်းနည်းပါးခဲ့သည်။
ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ဖောင့်သည် ​ ClearType Technology ကိုကောင်းစွာ အသုံးပြုထားသဖြင့် အခြား Unicode Font များထက် LCD screen တွင် သိသိသာသာ ချောမွတ်မှု ရှိပါသည်။
ဇော်ဂျီဖောင့် အသုံးများရခြင်း အကြောင်းအရင်း တစ်ခုမှာ မြန်မာဘာသာနှင့် သက်ဆိုင်သော Unicode ပြုပြင်ခြင်း အပြီးမသတ် နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၂ဝဝ၈-ခု၊ ဧပြီလ (၄)ရက်နေ့ပြဋ္ဌာန်း သော Unicode 5.1 မှာ မူအားဖြင့် ခိုင်မာခြင်းရှိသော်လည်း ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ဖောင့်သည် ​ လောလောဆယ်ထိ လိုက်နာခြင်းမရှိပါ။ လိုက်နာခဲ့လျှင်လည်း ယခုသုံးနေသော် ဇော်ဂျီစာများဖြင့် ကိုက်ညီမှု မရရှိနိုင်ပေ။ ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ဖောင့်သည် မည်သည့် Unicode version မျှ လိုက်နာခြင်းမရှိသောကြောင့် သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် နောင်တစ်ချိန်တွင် သုံးမရမည်လောဟု သံသယများ ရှိနေပါသည်။
စံယူနီကုဒ်ဖောင့်များတွင် မြန်မာ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစာ ၆ မျိုးပါဝင်သောလဲ ဇော်ဂျီဖောင့်တွင် တိုင်းရင်းသား ဘာသာစာများ မပါရှိပေ။ သို့သော် ဇော်ဂျီဖောင့် ကိုချဲထွန်၍ ပြုလုပ်ထားသော ကရင်ဘာသာအတွက် ဇွဲကပင်ဖောင့်  ၊ မွန်ဘာသာအတွက် ကော်မလိတ်မန်ညိဖောင့်  တို့ ရှိကြသည်။ ဇောဂျီအဖွဲ့သည် အခြား ဘာသာများကို ထပ်မံထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဟုလည်း ပြောကြားထားသည်။
Myanmar Shan Mon Sanskrit and Pali S'gaw Karen Western Pwo Karen Eastern Pwo Karen Geba Karen Kayah Rumai Palaung No character
Android တွင် Myanmar Fonts (Zawgyi နှင့် Myanmar3) ကို အသုံးပြု့၍ရနိုင်ရန် ko Sean Lin မှပြု့လုပ်ခဲ့ပြီး Android အတွက် download လုပ်ရန် F​allback Fonts များနှင့်​ root လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ၄င်း၏ Web site ဖြစ်သော http://seanlin.me/ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Prince Ka Naung - Unify Converter Engine (LGPL) - WinInnwa, CE Fonts, Wwin_Burmese, Gandamar Fonts, King Fonts, Metrix, Academy, Zawgyi, UniBurma, Myazedi, Myanmar3, PadaukOT, Parabaik, UniMM ဒီ​ဖောင့်တွေ ကိုတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။